भण्डारमा जूता को फिर्ती
कम गुणस्तर वा दोषपूर्ण जूता खरीद कुनै एक प्रतिरक्षा छ। कसरी स्टोर गर्न जूता फर्कन? नियम यस्ता समस्याहरूको यो धेरै विरलै आउँछ व्यवहार मा अदालत अघि प्राप्त भएको थियो जसमा प्रशासनिक स्तर व्यावसायिक सुविधा मा समाधान गर्दै हुनुहुन्छ।
बाहिर भण्डारमा जूता को फिर्ती यसको लागि पैसा बोक्न र प्राप्त गर्न, तपाईं व्यवस्था अनुसार कार्य गर्नुपर्छ। उपभोक्ता संरक्षण मा व्यवस्था प्रक्रिया प्रक्रियाहरु काम गर्दछ regulates। तपाईं खरीदार जिम्मेवारी मा उत्पादन निर्माता को दोष मार्फत उठ्दा जो एक दोष, छ भनेर प्रमाण प्रदान गर्न थाहा हुनुपर्छ।
जूता एक ग्यारेन्टी कार्ड बिना बेचिएको थियो भने पनि, खरीदार नै लागत मा जूता को एक समान जोडी संग यो पूर्ण रकम फिर्ता वा प्रतिस्थापन गर्ने अधिकार छ। दोष जूता किनेको थियो भनेर प्रमाणित गर्न, तपाईं विशेषज्ञता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। क्यालिब्रेसन, विक्रेता को खर्च मा गरेको छ ग्यारेन्टी अवधि सम्म समाप्त भएको छैन भन्ने प्रदान। अन्यथा, यो ग्राहकहरु गर्न विशेषज्ञता भुक्तानी गर्न र फिर्ता तपाईं सक्दैन महसुस जूता आवश्यक हुनेछ।
किनभने खरीदार को खडा भएको छ जो दोष को विशेषज्ञ पुष्टि संग, पसल पूर्णतया आफ्नो खरीद मूल्य फिर्ता गर्न बाध्य छ। को स्वतन्त्र विशेषज्ञता पक्का हुन, यो सबै भन्दा राम्रो एक विशेष प्रयोगशाला गरिन्छ। तर, हामी भने कारखाना विवाहको धारणा पुष्टि छैन, विशेषज्ञ सेवा आफ्नै लागि भुक्तानी गर्न आवश्यक हुनेछ भन्ने तथ्यलाई लागि तयार हुनुपर्छ, र तिनीहरूले धेरै महंगा छन्।
जूता अक्सर संभव विशेषज्ञता बिना छ फर्काउने। त्यहाँ बिताए पैसा फिर्ता गर्न अनुरोध संग नक्कली मा एक बयान संग विक्रेता गर्न दोष सम्बोधन गर्न स्पष्ट आवश्यकता हुँदा। नियम, सम्मानित पसलहरुमा एक दोष उपस्थिति पत्ता लगाउन र द्रुत द्वन्द्व समाधान गर्न सक्षम छन् कि विशेषज्ञहरु छ। ठूलो स्टोर कदर प्रतिष्ठा, त्यसैले यसलाई आफ्नो दुखी खरीदार छोड्न unprofitable छ, यो परीक्षा र परीक्षण गर्न मामला ल्याउन भन्दा गरिब-गुणवत्ता जूता प्रतिस्थापन गर्न सजिलो छ।
जूता को फिर्ती उनको लागि ग्यारेन्टी अवधि सम्बन्धित कृपया सजग हुनुहोस्। 19.01.98 को आरएफ सरकार उर्दी (№ 55) सिजन जूता बाहिर खरिद मा ग्यारेन्टी यसको आपत्तिजनक सुरु कि फेला परेन। नोभेम्बर 1 वसन्त देखि - - मार्च 1 वर्ष देखि - 1 सेप्टेम्बर देखि - 1 मई, शरद ऋतु देखि जाडो लागि।
उपभोक्ता संरक्षण गैर-खाद्य सामान मा व्यवस्था अनुसार (जूता समावेश) अयोग्य गुणस्तर, विक्रेता संग साटासाट गर्न सकिन्छ उहाँले आकार, आकृति, शैली, आकार, रंग वा कन्फिगरेसन मा उपभोक्ता छैन आयो भने। यो खरिद दिन गणना छैन, खरिद पछि 14 दिन भित्र साटासाट गर्न सकिन्छ। माल प्रयोग गरेका छैनन् गरिएको भने र मूल उपस्थिति, यसको गुण हो, कारखाना लेबल र छाप संरक्षित प्रतिस्थापन कम गुणस्तर जूता, हुन सक्छ। त्यो जूता मात्र मामला मा नजिक हुन सक्नुहुन्छ यो लगाएका छैनन् भने आदान प्रदान गर्न छैन।
एक फरक मोडेल संग जूता फिर्ता गर्न, र प्रतिस्थापन उत्पादन, तपाईं महंगा नयाँ जोडी, वा यो सस्ता छ भने देखि पसलमा नगद रजिस्टर यो भने मूल खरिदको रकम र नयाँ जोडी को लागत मा आधारित उपयुक्त पुन: गणनामा बनाउन, र फरक भुक्तानी गर्न आवश्यक छ। तपाईं जूता स्टोर लागि पैसा फिर्ता जब यसको एक खरीदार फेला दौडान सक्छ जो, गुणवत्ता को हानि लागि रकम को भाग चढाउनसमेत कुनै अधिकार छ।
तपाईं जुत्ता फिर्ता गर्न सक्दैन यो भने:
पहना, सञ्चालन समयमा गठन कमजोरीहरू छ;
हर्जाना (खरोंच, कटौती, आदि), लगाउन वा अनुचित सुकाउने कारण विकृत छ छ;
स्टोर प्रस्तुति गर्न जीर्णोद्धार क्रेता;
यो एक छुट रूपमा खरिद गरिएको थियो।
छैन मा तपाईं फिट गर्नुभएको जूता को एक फिर्ती उत्पादन गुणस्तर संकेतक, यो सबै सामान, मूल बक्स मा पैक संग उपयुक्त को एक ट्रेस बिना, आफ्नो शुद्ध रूप मा विक्रेता प्रदान गर्न आवश्यक छ।
तपाईं जसमा सञ्चालन समयमा दोषपूर्ण हुन फेला परेन जूता, फिर्ता गर्दा, यो पनि ड्राई सफा र, (बन्द भङ्ग वा क्षतिग्रस्त भागहरु सहित) सबै सामान संग हुनुपर्छ।
अनलाइन स्टोर मा swimwear
सुट - एक क्लासिक र सुरुचिपूर्ण
अण्डा को गर्मी चालू - व्यावहारिक सल्लाह विशेषज्ञ
गल्ती बिना लेख्न कसरी सिक्न? competently लेख्न
मानिसहरूको ध्यान कसरी आकर्षित गर्ने?
लुगा धुने मेसिन एलजी F1096SD3: समीक्षा, निर्देशन
Streptokarpusy: घर मा हेरविचार, सम्भव समस्या र तिनीहरूलाई मुकाबला को विधिहरू
सर्वेक्षण: परिभाषा, आधार, लक्ष्य, उद्देश्य, प्रक्रिया। यो सर्वेक्षण गर्नुहोस् ...
अनुसार व्यवस्था संग मा बिदा कसरी गणना गर्न